लकडाउनले गर्भवतीमा बढायो ‘डिप्रेसन’ – Health Post Nepal
लकडाउनले गर्भवतीमा बढायो ‘डिप्रेसन’
२०७८ माघ २० गते ११:३६
काठमाडौं – कोरोनाको समयमा लकडाउनका कारण घरमा बस्ने मानिसको मनमा नकारात्मक असर परेको छ। यसको प्रभाव गर्भवतीहरुमा बढी देखिएको छ। कोरोनाको समयमा गर्भवतीहरु डिप्रेसनको सिकार हुने गरेको एक अनुसन्धानले दाबी गरेको छ। यो अध्ययन बीएमसी जर्नलमा प्रकाशित भएको थियो।
अध्ययनकी लेखिक डा. सिल्भिया रिगाटो भन्छिन्, ‘कोरोना महामारीले संसारभरका मानिसलाई कैद गरेको छ। एकातिर कोरोनाको फैलावट रोक्न यी कदम प्रभावकारी सावित भएका छन् भने अर्कोतर्फ कोरोनाको समयमा गर्भधारण गर्ने महिलामा नकारात्मक असर पनि परेको छ। संक्रमणकालमा गर्भधारण गर्ने महिलाहरूमा डिप्रेसन वा चिन्ताको समस्या देखिएको छ।’
संक्रमणको समयमा डिप्रेसनमा बृद्धि
संक्रमणकालमा गर्भधारण गर्ने ३० प्रतिशत महिलालाई अध्ययनमा समावेश गरिएको थियो। अनुसन्धानकर्ताहरूले महिलाहरूमा डिप्रेसन दर १७ प्रतिशतबाट ४७ प्रतिशतमा बढेको पत्ता लगाए। यस्तै चिन्ताको दर ३७ प्रतिशतबाट ६० प्रतिशतमा पुगेको छ।
नकारात्मक जवाफ दिने महिलामा चिन्ता बढी
अध्ययनमा गर्भवती महिलालाई कोरोनाको असरबारे प्रश्न गरिएको डा. रिगाटोले बताइन्। यस क्रममा कोरोनाको असरबारे नकारात्मक जवाफ दिने महिलामा चिन्ताको समस्या बढी देखिएको थियो। यसबाहेक सकारात्मक जवाफ दिने महिलामा यो समस्या कम देखिएको छ।
बच्चासँगको लगाव कम
रिगाटोले भनिन् कि, अप्रिल २०२० देखि जनवरी २०२१ को बीचमा गरिएको अध्ययनले कोरोना अवधिमा अधिकांश मानिसमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढेको देखाएको छ। अध्ययनले बच्चा जन्माउने महिलाले बच्चासँग कम जोडिएको महसुस गरेको पाइएको बताइन्।
औषधि प्रयोग नगर्नुहोस्
कोरोनाको समयमा गर्भवती महिला डिप्रेसनमा परेका धेरै केसहरू रिपोर्ट गरिएका छन्। विज्ञहरुका अनुसार यस्ता धेरै घटनाहरु बाहिर आएका छन् जसमा महिलाहरुले आफ्ना हुने सन्तानको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विज्ञहरूले डिप्रेसनबाट पीडित महिलाहरूलाई महामारीको बीचमा औषधि प्रयोग नगर्न सल्लाह दिएका छन्। कोरोना महामारीका बेला गर्भवती महिलाहरु मानसिक तनावबाट गुज्रिरहेका विज्ञहरुले बताएका छन्।